जहाँ सुर्य अस्ताउँदैन, धेरै दिनसम्म रात नपरी २४ घण्टा दिन मात्र हुने देश - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा जहाँ सुर्य अस्ताउँदैन, धेरै दिनसम्म रात नपरी २४ घण्टा दिन मात्र हुने देश
जहाँ सुर्य अस्ताउँदैन, धेरै दिनसम्म रात नपरी २४ घण्टा दिन मात्र हुने देश
चाखलाग्दो कुरा admin December 2, 20200Comment
एजेन्सी जहाँ सुर्य अस्ताउँदैन । दिन पछि रात र रात पछि दिन यो प्राकृतिक नियम नै हो । यस्मा कुनै शंका छैन । , तर यदि केही महिनासम्म रात नपरोस् त ? केवल दिन मात्र होस् कस्तो होला ? के यसको परिकल्पना कहिल्यै गर्नु भएको छ ? रात नभएमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि कति बेला सुत्ने र कति बेला उठ्ने भन्ने ।
के यस्तो हुन्छ होला त ? यदि भईहालेछ भने पनि यो निकै नै आश्चर्य लाग्दो कुरा हो । तर यही आश्चर्य लाग्दो कुरा विश्वको कुनै देशमा भईरहन्छ । र यो सत्य हो । विश्वको एक यस्तो देश छ जहाँ केही दिनसम्म सुर्य अस्ताउँदैन । यो देशमा सुर्यका प्रकाश रहिरहन्छ । रातको महसुस नै हुँदैन् ।
त्यो देश हो नर्वे । जस्लाई मध्य रात्री देश पनि भनिन्छ । त्यहाँ मे देखि जुलाईको बीचमा करीब ७६ दिनसम्म घाम अस्ताउँदैन । ७६ दिनसम्म सुर्यको प्रकाश डुब्दैन् । धेरै मानिसहरुले रातै नभएको आनन्द महसुस गर्नकै लागि नर्वे पुग्ने गरेका छन् ।
ग्रेट ब्रिटेनपछि युरोपको सबैभन्दा ठुलो आईलैन्ड हो । यहाँ रातमा पनि सुर्यको प्रकाशको आनन्द लिन सक्कनुहुन्छ । १० मे बाट जुलाईको अन्त्यसम्म सुर्य डुब्दैन । यस्को सम्झना जीवनभर आइरहन्छ ।